अफ सिजन भन्ने हट्यो – Arthik Awaj
अफ सिजन भन्ने हट्यो
By आर्थिक आवाज २०७५ पुष १६ गते सोमबार ०२:३० मा प्रकाशित
गुप्त गिरी, रेसिडेन्ट म्यानेजर, होटल सांग्रीला
होटल सांग्रिलामा अहिले अकुपेन्सी कस्तो छ ?
हाम्रो होटलमा अहिले अकुपेन्सी राम्रो छ । न्यू इयरको समय भएकाले अहिले होटलको अकुपेन्सी शत प्रतिशत छ । केही दिन अघिसम्म भने ८० प्रतिशत थियो ।
नयाँ वर्षमा प्रि बुकिङ कत्तिको भएको छ ?
नयाँ वर्षका लागि त प्याक छ । पर्यटकको रोजाइमा पर्ने होटल भएकाले कोठा लिने होडबाजी नै चलेको छ । सांगीतिक, सांस्कृतिक र गाला डिनर भएकाले पर्यटक रम्ने समय हो यो । त्यसैले प्रि बुकिङ राम्रो छ ।
यो वर्षको अकुपेन्सी चाहीं कस्तो रह्यो ?
यो वर्षको अकुपेन्सी राम्रै भयो भन्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अकुपेन्सी बृद्धि भयो । पर्यटक आगमनका हिसाबले र आम्दानीको हिसाबले यो वर्ष राम्रो भयो ।
तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो वर्षको भन्दा कस्तो रह्यो ?
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको अकुपेन्सी १२ प्रतिशतले बृद्धि भयो । अघिल्लो वर्ष करिब ६० प्रतिशत मात्र थियो अकुपेन्सी । तर यो वर्ष बढेर ७२÷७३ प्रतिशत पुगेको छ अकुपेन्सी ।
पोखरा सडक महोत्सवले होटलको अकुपेन्सीमा कत्तिको सघाउँछ ?
अंग्रेजी नयाँ वर्षमा होटलको अकुपेन्सी ह्वात्तै बढ्छ । यो महोत्सवकै कारण हो वा प्रतिफल हो भनौं । यो वर्षपनि होटलका रुमहरु शत प्रतिशत बुकिङ भइसके । होटलको संख्या थपिएको छ तर यो नयाँ वर्षमा जति होटल थपिएपनि कोठा पुग्दैनन् । हो हाम्रोमा पनि डिमान्ड अनुसार कोठा छैनन् । जति कोठाहरु छन् ति बुकिङ भइसके ।
होटल सांग्रिला नै किन रोज्छन् पर्यटकले ?
होटल भनेको सर्भिस सेक्टर हो । पर्यटकले जहाँ सेवा सुविधा पाउँछ त्यहीँ बस्ने हो । हाम्रो उत्कृष्ट सर्भिस भएकैले पर्यटकको रोजाइमा पर्छ । पर्यटकले होटलको स्ट्याण्डर्ड पनि खोज्छन् । पारिवारिक वातावरण छ । बसाई कम्फर्टेवल पनि खोज्छन् । सँगसँगै होटलमा दिइने आतिथ्यता र स्वाद पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रशस्त पार्किङ, हिमालका भ्यूहरु जहाँ बस्यो त्यहिंबाट देखिने विशेष होटल सांग्रिलाको विशेषता हो । यी सबै कुराहरुमा सांग्रिला उत्कृष्ट छ, त्यसैले त पर्यटकले होटल सांग्रिला नै खोज्छन् ।
सांग्रिलाको पर्यटक अटाउने क्षमता चाहीं कति हो ?
हाम्रो होटलमा ६१ वटा कोठाहरु छन् । हाम्रोमा सबै कोठाहरु एकै खालका छन् । सबै एउटै स्ट्यार्डका छन् । फरक भनेको ग्राउण्ड फ्लोर र अपर फ्लोरमा भन्ने मात्र हो । ग्राउण्ड फ्लोरबाट भन्दा माथिल्लो फ्लोरबाट अझ बढी राम्रो माउन्टेन भ्यूहरु देखिने मात्र हो । यद्वपि तल्लो फ्लोरमा गार्डेन भएकाले दुबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हाम्रो होटलका सबै कोठाहरुमा डबल बेड छन् । त्यसैले यसको पर्यटक अटाउने क्षमता भनेको १२२ हो । तर एउटा बेडमा परिवार भए ३ जनासम्म पनि एडजस्ट गर्न मिल्छ ।
न्यू इयर इभ विशेष केही छ कि ?
सांग्रिला भिलेज रिसोर्टमा न्यू इयर इभको दिन लाइभ कन्सर्ट आयोजना हुँदैछ । पोखराको लोकल व्याण्डसहित सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्यरातिसम्मै हुनेछ । पोखरेली कलाकारलाई प्राथमिकता दिनुका साथै संस्कृति उजागरलाई प्राथमिकता दिनेगरेका छौं । न्यू इयर इभको स्पेसल भनेको गाला डिनर हो । गाला डिनरमा लाइभ स्न्याक्स, बार्बिकीलगायत हुनेछ । सँगसँगै वेलकम स्न्याक्स र डिनरपनि छ । लाइभ कन्सर्ट विथ कल्चरल प्रोग्राममा सहभागी हुनका लागि प्रति व्यक्ति ४ हजार रुपैयाँको टिकटदर तोकिएकोछ । टिकटमा डुअर प्राइज पनि रहेको छ ।